ရုရှားမှ မြန်မာကျောင်းသားများ အဆောင်မှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နေသည် ဆိုသည့် သတင်း မမှန်ဟုဆို ~ Myanmar Express
Posted in: လူပြိန်းကြိုက် မီဒီယာသမားများ
တော်ပါပေတယ် ဗောဒ့်ကာ ဆရာတွေရယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ရုရှားကိုသွားခဲ့တဲ့ နော်ဝေက ကောင်မ ဆိုတာ မေကိုလတ် ပဲ ဖြစ်မယ်
ဝေနှင်းရဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုက်ဒ်လေး ကို လာလည် ကြပါအုန်းရှင်။အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။www.waihninpwintthon.blogspot.com
မာမီမင်းသိန်းနှင့် သူ၏ ဗလောင်းဗလဲ သားများ
13 November 2011 01:53
အင်းဒါဆို ဦးမင်းသိန်းက လိမ်တာပေ့ါနော်မဟုတ်ပဲနဲ့ စွပ်စွဲတယ်ဆိုတော့မောင်မင်းသိန်း လိမ်တာပေါ့VOAမှာ ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွတ်ကအမှန်လို့ ပြောသွားတယ်နော်တို့က ညီးတို့ အခြောက်တွေမှတ်လို့ဒါဆို ဗလောင်းဗလဲပြောတဲ့ ၇ု၇ှားက မိန်းမ၇ှာတွေပေါ့နော် သံ၇ုံးတဆိပ်အတု လုပ်လို့၇လားဟင် သိချင်လို့ စင်ကာပူမှာ သုံးချင်လို့
14 November 2011 06:43
ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့လူက မဟုတ်ဘူးပြောနေတာတောင်မှ မရောက်ဖူးတဲ့လူတွေက ပြင်းနေကြတယ် ဒုက္ခ
ကျောင်းသားဆောင်မှာ တစ်လလောက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ပေးနေတဲ့ အဆောင်ဆိုတော် တော်တော် စည်းကမ်းရှိကြတာပဲ။ LOL...
ကျောင်းသားဆောင်မှာ တစ်လလောက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ပေးနေတဲ့ အဆောင်ဆိုတော် တော်တော် စည်းကမ်းရှိကြတာပဲ။ LOL...money make everything!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
မင်းတို့ကလည်း ပညာမဲ့အတိုက်အခံတွေလို့အပြောခံရတာတောင် နည်းသေးတယ် ဦးနောက်ကိုမရှိကြဘူး ရုရှားနိုင်ငံက အဆာင်ဟ၊ မြန်မာနိုင်ငံကအဆောင်မဟုတ်ဘူး တစ်လမကဘူး တစ်သက်လုံးနေလို့ရတယ်..ဒါတောင် မစဉ်းစားတတ်ကြဘူးလား စောက်သုံးကိုမကျဘူး
26 November 2011 01:42
မှန်တယ် မင်းတို့မှာ သူတပါးမကောင်းကြောင်းပြောဖို့ကလွဲရင် ဘာကိုများအလေးထားစဉ်းစားဖူးလဲ? မင်းတို့ကိုယ်မင်းတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ ..မင်းတို့ရောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်ထိ ဘယ်သူ့အတွက်ဘာများကောင်းကြိုးပြုခဲ့ဘူးလဲ? တခါ လေးမှတွေးဖူးခဲ့ရဲ့လား? သူ့ဘာသာသူပညာသင်နေတာ မင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲ? သိက္ခာကျတယ်ပြောရအောင် မင်းတို့က မြန်မာတွေဟုက်လို့လား? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြန်မာလို့ယူဆသေးရင်တော့ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပြီ....
24 January 2012 17:18
ဟိုစောက်တစ်လွဲကောင်က မိန်းမလို မိန်းမရနာမည်တပ်ပြီး ပြောသွားသေးတယ် စည်းနဲ.ကမ်းနဲ. နေဖို.ပြောတာ ဆန်းသလား မအေလိုးများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ပြန်ကြည့် ပြီးမှ သူများကိုဝေဖန်ဖို.စဉ်းစား အောက်တန်းစားတွေ ခွေးလောက်တောင်စောက်ဆင့်မရှိဘူး
[image: မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။]
“သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ မေလ ၁၈ ရက် စနေနေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီခွဲမှာ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ သူတ...